Nge Ukuhamba Soviet amandla imikhiqizo eminingi kanye izenzakalo yamane yaba ezimpilweni zethu futhi kancane kancane kwanda. Enye yemikhiqizo ukuthi bavela izimangaliso kwezilwandle babé yinto ebalulekile ekuphileni kwethu kwansuku zonke, kube-Coca Cola. Lokhu isiphuzo esiphuzwayo esikunoma izingane kanye nabantu abadala. Babalelwa ku-ke uya eziningi zinganekwane, ngokuvamile okusikhumbuza tale esabekayo. Futhi akusimangazi ngoba ukubunjwa Coca Cola iminyaka eminingi ukuthi yimfihlo. Futhi abantu yokuthi uma ukwenza okuthile ungatsheli, ingabe ngaleso sikhatsi bafundza bacala baziqambela imininingwane elingekho. Yiqiniso, iphakethe ecacisiwe Ukwakheka eseduze komkhiqizo, okubandakanya udayi, isikhutha wali band acid, i-caffeine, ushukela noma Sweetener nokunambitheka zemvelo engaqondakali. Kepha akusimina kodwa ukukhipha konke akwaziyo akutshele futhi impendulo ewujuqu umbuzo yini eyenza Coca Cola.
Ukuze kwenziwe ucwaningo olunzulu ngaphezulu umbuzo okufanele mhlawumbe ubuyele emuva 1886, lapho wemithi John Pemberton, isakhamuzi Atlanta, owasungula isiphuzo entsha. Isihloko sakhe yasungulwa Pemberton ezimali, ilungu amagama yokuqala izithako, eyasebenza njengodonga le amahlamvu e-coca namantongomane i-kola - umuthi elishisayo. Ingxube u buhlanjululwe ngamanzi kanye okuthengiswa ekhemisi, lapho, Nokho, akusiyo athandwa kakhulu. Akunakwenzeka ukuthi siqiniseka ngokugcwele, akuyona indaba inganekwane kanjani Coca Cola kwaba soda. Nokho, lithi omunye izivakashi ekhemisi, owayehlushwa a Hangover, ucelwe ukuthi ungeze entsha isiphuzo igesi. Njengoba Coca Cola ngenjabulo ukusetshenziswa njengendlela tonic isiphuzo esiqabulayo. Kuhle kokusho ukuthi logo Coca Cola awuzange ushintshe kusukela esethulweni lesi siphuzo. Naye wanikelwa yasungulwa Pemberton accountant.
Kwaphela iminyaka eminingi isiphuzo, yebo, ayikwazanga zihlala zinjalo, izithako ezahlukene Coca Cola ngezikhathi ezahlukahlukene zishintshile. Kuze kube muva nje, iresiphi ngqo kugcinwa kuyimfihlo zigadiwe ngumkhiqizi. Akungabazeki ukuthi ukudalwa ekusithekeni ngokweqile emhlabeni Eqinisweni eyenza Coca Cola kwakuyinzuzo kuphela isiphuzo ethandwa kakhulu. Iningi zonke izingxabano nasekuqageleni okubangelwa isithako ongaqondakali kuyinto akhiphe "Coca-Cola". Kwakuthinta kucatshangwa ukuthi siqukethe inhlanganisela material plant, kodwa akekho kubona owayazi iqiniso. Ngisho abasebenzi isiphuzo ukukhiqizwa isitshalo akakwazanga ukucacisa isimo, ngoba izithako axutshwa ngaphansi amagama ikhodi. Kwatholakala ukuthola ukuthi yini eyenza Coca Cola, ngokwanele ukumangalela inkampani ukuthi empeleni wenza eTurkey. Abameleli beNdikimba Turkish St Nicholas Foundation uthe ngaphansi komthetho wezwe nomkhiqizi ubophekile ukuba akhombise isembozo of kwengoma ngqo komkhiqizo.
Lapho izwe wafunda eyenza Coca Cola kusimangaze ngempela abathandi isiphuzo kwakungekho umkhawulo. Akuwona wonke umuntu wakujabulela ukufunda ukuthi isithako ongaqondakali Yenziwe izinambuzane. Ukuze kukhiqizwe zemvelo carmine udayi akha lesi coca cola esetshenziswa nabesifazane cochineal - isinambuzane okuqondene Hemiptera oda. It kuvela ukuthi abantu bakwazi ukuthola carmine kusukela ezikhathini zasendulo, ukuze Abenzi Coca Cola ukuthi baziqambele noma yini entsha.
Ukuze abantu ikakhulukazi iyashesha ukuzwela ukuthi baphuze lapho bephuza, wanezela ingxenye etholwe kusuka izinambuzane, kungase kube into emnandi kakhulu. Mhlawumbe ingxenye isizathu esenza ingxenye ngakho eside yimfihlo. Nokho, asikwazi kodwa ikakhulu thokozani ukuthi udayi carmine nhlobo odabuka yemvelo futhi akuyona ingozi emzimbeni. Okungenani phakathi abalandeli legend usitshela umonakalo kuyisimanga ukuthi umzimba Coca Cola, manje ingasaphathwa okwesabisa abangane.